[06 / 03 / 2020] Bursaray Wagons များသည်လက်ချင်းပြောင်းနေကြသည်	16 Bursa
[06 / 03 / 2020] အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များကိုပိုးသတ်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည် Istanbul ရှိမည်မျှကုန်ကျမည်နည်း။	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[06 / 03 / 2020] SATSO ဥက္ကPresident္ဌAltuğ 'TÜRASAŞစင်တာသည် Sakarya တွင်ဆက်လက်တည်ရှိမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်'	54 Sakarya
[06 / 03 / 2020] အဘယ်ကြောင့် TCDD တွဲဖက်ကုမ္ပဏီသုံးခုပေါင်းစည်း?	26 Eskisehir
[06 / 03 / 2020] Kütahyaမြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်းအတွက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ	43 Kutahya
အစ္စတန်ဘူလ်တွင် TTYD မှစီစဉ်သောခရီးသွားလုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိုရမ်၌ Erciyes နှင့်ဒေသ၏ကြွယ်ဝသောခရီးသွားလုပ်ငန်းအလားအလာကိုရှင်းပြပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို Erciyes သို့ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ တူရကီ၏ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအသင်း (TTYD) နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရုံး၏ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ [ပို ... ]
BBB သမ္မတ Ekrem amomamoğluကတိထားသည့်အတိုင်းမက်ထရိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဦး စားပေးသည်။ Sultanbeyli နှင့်Ataşehirမြေအောက်ရထားများအပြီးတွင်တတိယမြောက်မက်ထရို၊ Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ Imamoglu, Mecidiyekoy-Mahmutbey [ပို ... ]
Bursa Metropolitan မြူနီစီပယ်နှင့်Burulaşတို့၏အလှူငွေဖြင့်Güzel Gemlik ဘတ်စ်ကားနှင့် Minibuscular သမဝါယမယူဆောင်လာသည့် microbus အသစ် ၂၈ ခုအားအခမ်းအနားနှင့်အတူစတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ Bursa Metropolitan မြို့တော်ဝန် Alinur Aktaş၊ [ပို ... ]
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ 30ဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင်စတင်ခဲ့သောညဥ့်မြေအောက်ရထားလမ်းလျှောက်ထားမှုသည် ၆ လအတွင်းခရီးသည် ၁ သန်း ၂၁၀,၀၀၀ အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ သူတို့ကမက်ထရိုမက်ထရိုကိုညအချိန်တွင်ဘေးကင်းစွာသွားလာရန်ပိုနှစ်သက်ကြသည်ဟုဆိုသည်။ Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) ၏ Affiliate [ပို ... ]
လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုသည်မြစ်တစ်လျှောက်စီးဆင်းနေသောမော်လီကျူးများအစားရေစီးဆင်းမှုနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ အားသွင်းထားသောအမှုန်များသည် conductor တစ်ခုကိုအောက်သို့ရွေ့စေသည်။ လျှပ်စစ်စီးကြောင်း၊ မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက်စီးဆင်းနေသောအားသွင်းအမြန်နှုန်း [ပို ... ]
ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီး Turhan အုပ်ချုပ်ရေးမှူး mailsmail Ustaoğlu၊ AK Party Trabzon လက်ထောက် Salih Cora၊ Trabzon Metropolitan မြို့တော်ဝန် Murat Zorluoğlu၊ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများညွှန်ကြားရေးမှူး Abdulkadir Uraloğlu, AK ပါတီပြည်နယ်ဥက္ကဌ Haydar Revi, Ortahisar [ပို ... ]
လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ခွဲခန့်ကပထမဆုံးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံကိုစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည့် ESHOT သည်နောက်ထပ်သုံးထပ်ဆောက်နေသည်။ အဆောက်အအုံသစ်များစတင်တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ESHOT သည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များမှလျှပ်စစ်လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်မည်။ Izmir Metropolitan မြူနီစီပယ် ESHOT [ပို ... ]
၀ န်ကြီး Turhan၊ TCDD Tasimacilik AS ။ အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန၏ပထမအကြိမ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုအစည်းအဝေး၌မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင်ကုမ္ပဏီသည်မကြာသေးမီကတည်ထောင်ခဲ့သောလူကြိုက်အများဆုံးအဖွဲ့အစည်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်၏စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ [ပို ... ]
Ankara Metropolitan မြို့တော်ဝန် Mansur Yavaşကအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်သောအရေးကြီးသောထုတ်ပြန်ချက်များကိုပြောကြားစဉ်သူသည်သိလိုစိတ်၏ Ankapark နှင့် Dikimevi Nata Vega Metro Project အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးခဲ့သည်။ Ankara မြို့တော်ဝန်မြို့တော်ဝန် Mansur [ပို ... ]
Beşköprüနှင့်DonatımရှိAdapazarı-Istanbul ရထားလမ်းကြားပထမအပိုင်းကိုရှေးဟောင်းသုတေသနနေရာအဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်။ ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ Kocaeli ၏ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဘုတ်အဖွဲ့တွင်ရထားလမ်းနှင့်ဘူတာရုံတည်ဆောက်ခြင်း၊ [ပို ... ]
ဖေဖော်ဝါရီလတွင် DHMI သည်လေကြောင်းလိုင်းအားအသုံးပြုသောခရီးသည်အရေအတွက်ကိုကြေငြာခဲ့သည်
TCDD အသက်မွေးမှုပညာရေးနှင့်နွေရာသီ Internship Applications ကို
Bursaray Wagons များသည်လက်ချင်းပြောင်းနေကြသည်
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များကိုပိုးသတ်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည် Istanbul ရှိမည်မျှကုန်ကျမည်နည်း။
SATSO ဥက္ကPresident္ဌAltuğ 'TÜRASAŞစင်တာသည် Sakarya တွင်ဆက်လက်တည်ရှိမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်'
အဘယ်ကြောင့် TCDD တွဲဖက်ကုမ္ပဏီသုံးခုပေါင်းစည်း?
mirzmir Metropolitan သည်အမျိုးသမီးမောင်းသူအရေအတွက်ကိုတိုးပွားစေသည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: B70 ကွန်ကရစ်အိပ်ပျော်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးယောဘသည်
9: မတ်လ 11 00 @ - 12: 00
တင်ဒါကြေငြာချက် - ကားငှားရမ်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံလိမ့်မည်
9: မတ်လ 14 00 @ - 15: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Ray ဝယ်ယူပါလိမ့်မည်
11: မတ်လ 14 00 @ - 15: 00
တူရကီအတွက်နေထိုင်ရန်နှုန်း Up ကိုအတွက်အပန်းဖြေ
မတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင်အမျိုးသမီးများအတွက် Ordu Boztepe ကြိုးတံဆိပ်လျှော့စျေး
IETT သည်လက်စ်ပိုးသတ်ဆေးကို Metrobus စခန်းများသို့ပို့သည်
TÃœRASAÅမှစတင်ခဲ့သောTÃœLOMSAÅ၏အုတ်မြစ်ကို ၁၈၉၄ တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
၂၃ နှစ်အကြာတွင် BMW သည်၎င်း၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်
ယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လူသိများသောအမှားများ
လျှပ်စစ် Ford Transit လာပြီ
နယူး Electric Fiat 500 ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
TOKİ Ankara Sincan Lot Drawing
၆၂ ပြည်သူ့အိမ်ရာကို Izmir Metropolitan Municipality မှပိုင်ဆိုင်ပြီး Tender မှရောင်းချမည်